Analog Devices 'ADM3058E, ADM2761E, ary ADM2763E dia manampy amin'ny fampihenana ny fotoana famolavolana sy ny vidin'ny fitaovana
ADI's ADM3058E, ADM2761E, ary ADM2763E transceivers miaraka amin'ny 1500 VDC miasa malefaka sy 5.7 kV nanamafy mitoka-monina mampihena ny fotoana famolavolana sy ny vidin'ny fitaovana fitakiana fangatahana angovo masoandro. Ny ADM2761E sy ADM2763E mitokana RS485 dia misy endri-javatra marani-tsaina hampihenana ny fametrahana ny rafitra farany sy ny fotoana fanaovana debug. Ny ADM3058E dia mamela ny mifanentana mihemotra ary afaka mitokana tanteraka ny fantsom-pifandraisana bandwidth CAN FD amin'ny halavirana lavitra kokoa sy ny sisin-tany nohatsaraina.
Ny rafitra 1500 V avo lenta dia nampihena ny fotoana fametrahana ary ahafahana mihena be ny vidin'ny rafitra ary koa ny fanatsarana ny famokarana angovo avy amin'ny masoandro isan-taona
IEC 61000-4-2 ESD sy 5.7 kV nanamafy ny fitokanan'i iCoupler nomerika miaraka amin'ny> 8 mm creepage sy clearance. Tazomy ny fahamendrehan'ny signal amin'ny tontolo masiaka miaraka amin'ny fiarovana azo antoka ny fitokanana nomerika iCoupler
Mandalo ny famoahana en 55032 / CISPR 32 kilasy B amin'ny solaitrabe 2 sosona. Ahafahanao node IEC61000-4-2 matanjaka miaraka amina emission CISPR32 voatanisa amin'ny tabilao 2 sosona ary mampihena ny fahasarotana amin'ny famolavolana, ny vidin'ny singa sy ny birao ary ny fotoana an-tsena
Fotodrafitrasa fananganana: fanaraha-maso ny fananganana sy ny automatique
EVAL-ADM3058EEBZ KARAZANA FANOMPOANA ADM3058E 4 - Avy hatrany
EVAL-ADM2761EEBZ ADM2761E BOARD EVAL 0
EVAL-ADM2763EEBZ ADM2763E BOARD EVAL 0
ADM3058EBRIZ 1500VIORM ISOLATED CAN-FD TRANSC 50 - Avy hatrany
ADM2761EBRWZ 1500VIORM ISORS485 500KBPS HD XC 47 - Avy hatrany
ADM2763EBRWZ 1500VIORM ISORS485 500KBPS FD XC 12 - Avy hatrany